Castle Seth Panis, Trano Seth Panis - Andorra la Vella
Eoropa Andorra Andorra la Vella
Adiresy: distrikan'i Barri Antic, Andorra la Vella, Andorra
Toerana hafa mahaliana: ny Casa de la Valle, ny Tranombokim-pirenena ao Andorra, ny hany trano fanorenana an'i Sala de la Giusticia
Ny Castle Seth Panis dia ivontoerana mistery mahagaga izay nanao ny andraikitra ara-politika rehetra tany Andorra. Any amin'ny tapaky ny taonjato faha-16, ireo solontenan'ny fitondram-panjakana rehetra dia nivory tao amin'ny tranon'ny Seth Panis mba hiresaka momba ny olan'ny politika. Amin'izao vanim-potoana izao dia lasa tranombakoka mahaliana, izay ahitana ireo sora-tanana ireo sora-tanana manan-danja ara-tantara, ny didy amam-pitsipika ary ny sary avy amin'ny hetsika isan-karazany manan-danja.
Toerana sy ny haikanto
Ny lapan'i Set Panis dia miorina ao afovoan-tanànan'i Andorra la Vella. Izany no tena nahasarika ny faritra Barry Atik. Raha any ivelany, tahaka ny trano iray ny trano Seth Panis, noho izany dia sahiran-tsaina ireo mpizaha tany rehefa miditra ao anatiny. Ao ambadiky ny varavaran'ilay tranobe dia misy efitrano mitovy amin'ny tranomboky lehibe misy rindrina sy ordinatera lehibe.
Ny vato fanorenana an'ilay trano, Seth Panis, dia vato mena. Toy ny tratra ny fitambaran-trano mihidy. Ao amin'ny zoro tsirairay amin'ny "tratra" dia tilikambo fandinihana, izay nisy ny mpiambina 24 ora nandritra ny taonjato faha-16. Ny varavarankely kely sy varavarana goavam-be dia manome ny tranokala Gothic. Ao anatiny, toy ny any ivelany ao an-tranon'i Seth Panis, dia tsy misy velarantany velively. Eo amin'ny rindrina iray ihany no misy ny akanjon'i Andorra, ary koa ny sainam-pirenena.
Ny tantaran'ny famoronana ny lapa Seth Panis
Tany amin'ny tapaky ny taonjato faha-16, namoaka didim-panjakana momba ny fananganana tahirin-kevitra ara-politika iray ny Vaomieram-panjakana Andorra, izay lasa tranon'ny Seth Panis. Notehirizin'izy ireo ny antontan-taratasy manan-danja sy manan-danja avy any Andorra. Ny fidirana ao amin'ny trano fanontam-pirinty dia solontena solontenam-panjakana, izay tamin'izany fotoana izany tao amin'ny fanjakana 7. Noho izany, dia nisy varavarankely fito nanana fanalahidy tsy miova tanteraka teo am-baravaran'ny lapoaly. Ny fanjakana tsirairay dia nahazo ny fanalahidy tokana ihany, kopia izay tamin'izany fotoana izany dia sarotra tamin'ny famoronana. Izany no mahatonga ny anaran'ilay trano fiarovana Seth Panis ho dikan-teny hoe "Tratra miaraka am-baravarana fito."
Fotoana misokatra ary lalana mankany amin'ny lapa
Amin'izao fotoana izao, i Seth Panis dia afaka mitsidika ireo mpizahatany amin'ny alalan'ny fanampian'ny mpitari-dalana. Ny tranobe dia manokatra ny varavarany amin'ireo mpizahantany amin'ny 10.00 ary miasa hatramin'ny 18.00.
Ny lapan'i Set Panis dia miorina ao afovoan-tanànan'i Andorra la Vella, izay napetraka ny làlan'ny bus rehetra ao an-tanàna. Mba hahatongavana any amin'ireo toerana, afaka mahazo taxi ianao, saingy sarotra ny manao izany eto amin'ity tanàna ity, noho izany dia tsara kokoa ny manofa fiara mialoha.
Ny tranombakoka fanandramana nataon'i Tom Titus
Mostar - toetrandro
Monastera ny Virjinin'i Masina Kykkos
Monastera amin'ny fananganana an'i Clarissa
Tigridia - fambolena sy fiahiana
Vetivety ny manasitrana cystitis?
Inona no tokony handravahana voatabia mba tsy hivoahan'ny ravina?
Soufflé avy amin'ny courgettes
Ankizivavy tanora iray - ahoana no fomba ahatongavana sy ny fomba hitazonana ny fitiavanao?
Zavamaniry zavamaniry mihinam-bibikely - toro-hevitra ho an'ny fambolena
Osteochondrosis amin'ny lelam-pitaratra - soritr'aretina
Ny Ring Claddagh
Afomanga ao amin'ny garderie
Tavoahangy maitso - fanatsarana
Fampidirana ny bala